14 / 06 / 2021 14 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 763 Views စာ0မှတ်ချက် Arthur Parsons, AT & T က, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, E3, Gamescom, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Star Wars, Star Warsဖြေ။ ။ Phantom အန္တရာယ်, Star Wars: Skywalker ၏မြင့်တက်မှု, The Phantom အန္တရာယ်, Skywalker ၏ထ, အဆိုပါ Star Wars ပြတယ်, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, Warner Bros., Warner Bros. အားကစားပြိုင်ပွဲ
မူရင်းကြေငြာချက်အရနှစ်နှစ်အကြာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမေးနေတုန်းပဲ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း?
Warner Bros. Games နှင့် TT Games ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပြသ သူတို့၏ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည့် Skywalker Saga တစ်ခုလုံးကို ၁၉၉၉ ဇွန်လတွင် E3 တွင် Phantom Menace နှင့် The Rise of Skywalker မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ထိုအချိန်က developer များက တိုတိုတိုယိုနောက်တွဲယာဉ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရေးထိုးထားသောခဲတံတစ်ချောင်းနှင့်အတူခေါင်းစဉ်၏အတိုင်းအတာကိုပြသသည်။
ထို့နောက်ခြောက်လကြာရေဒီယိုတိတ်ဆိတ်သွားပြီး၊ ဖြစ်ပျက်မည့်နိမိတ်လက္ခဏာများအတွက်။ က sizzle နောက်တွဲယာဉ် ဘို့ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း နောက်ဆုံးတွင် The Rise of Skywalker ၏ပြဇာတ်ရုံထွက်လာပြီးမကြာမီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုအသစ်များနှင့်ဂိမ်း၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ပါတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ထိုအချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဖြန့်ချိမည့်နေ့သည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာသတင်းကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ်မှာပါးလွှာစွာနူးညံ့စွာနဲ့ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ အသေးစိတ်အနည်းငယ် နောက်ဆုံးစတုတ္ထမေလပတ်လည်မှာ The နှင့် The Star Wars ပြသ အမှတ်တမဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် (ထို့နောက်ချက်ချင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်) ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်ကိုစီစဉ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်နေ့။ သို့သော်သြဂုတ်လတွင်မှားယွင်းသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Gamescom ဂိမ်း၏ပထမ (သို့သော်နောက်ဆုံးမဟုတ်) နှောင့်နှေး၏သတင်းကိုဆောင်ခဲ့၏။
A ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းနောက်တွဲယာဉ် အသစ်တစ်ခုကိုနွေ ဦး 2021 ပစ်လွှတ်ဝင်းဒိုး၏ကြေငြာချက်လိုက်ပါသွား Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမျှော်လင့်ထားတာထက်နည်းနည်းပိုကြာလျှင်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကြံပြုခြင်းသည်ကောင်းမွန်စွာအတူတကွလည်ပတ်နေသည်။ တစ် ဦး ကနှောင့်နှေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးကျနော်တို့ဂိမ်းလာမယ့်ခဲ့သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။
နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့အဓိကအားဖြင့်ဂိမ်းရဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ Warner Bros. Games နှင့် TT Games ဟာ hibernation ထဲပြန်ဝင်သွားပြီး သာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင်ခေါင်းစဉ်သည်၎င်း၏စီစဉ်ထားသည့်နွေ ဦး ရာသီနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီကြောင်းပြောရန် အစားထိုးရက်စွဲအစားအစားထိုးခဲ့သည်ဆိုလိုတာက Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း ထိထိရောက်ရောက်အသတ်မရှိနှောင့်နှေးနေသည်။
Gameplay အသေးစိတ်အချက်အလက်အနည်းငယ်မှလွဲပြီးဘာမှမကြားဖူးပါဘူး မဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးat နှင့်အပါအ ၀ င်၊ Warner Bros. Games သို့မဟုတ် TT Games မှမည်သည့်စကားလုံးမျှမပါ ၀ င်ပါ ယခုနှစ် virtual E3 ဖြစ်ရပ် - ပရိသတ်များသည် st ဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါart၏ status ကိုအကြောင်းကိုအလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြီးထွားဖို့ ing Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း.
ဂိမ်း reddit အသိုင်းအဝိုင်းဥပမာအားဖြင့် ၂၀၂၁ တွင်စတင်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်အားလုံးကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပုံရသည်။ သို့သော် ၂၀၂၂ ထုတ်လွှတ်မှုသည်ပင်ယခုအချိန်တွင်စွဲမြဲနေပုံရပြီးပြtroubleနာကဂိမ်း၏ developer နှင့်ထုတ်ဝေသူနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပြtroubleနာဖြစ်နေသည်။
TT Games ၏ဝါရင့်ဒီဇိုင်းဌာနမှူး Artနီးပါးတိုင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ Hur Parsons Lego ရုတ်တရက် 2005 ခုနှစ်ကတည်းကခေါင်းစဉ် partစတူဒီယိုနှင့်အတူနည်းလမ်းတွေ ed &ပြီလတွင် Warner Bros. Games ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော AT&T ရှိနေစဉ် လက်ရှိရောင်းချနေသည် partDiscovery မှထုတ်ဝေသူ၏။ ဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း ပြောရန်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။
ဒါကဒီနေ့ငါတို့ပတ်ပတ်လည်ကိုဆောင်တတ်၏, ချိန်ခွင်လျှာ၌ကျန်ကြွင်း Saga- spanning နောက်ဆက်တွဲ၏အဆုံးစွန်ကံကြမ္မာနှင့်အတူ။ ဘယ်လောက် hardcore ပေးတော်မူ၏ Lego ဗီဒီယိုဂိမ်းပရိသတ်များသည်ယခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်ခေါင်းစဉ်ကိုအရှုံးပေးနေပုံရသည်။ အကယ်၍ TT Games နှင့် Warner Bros. Games နှစ်ခုစလုံးသည်အနည်းဆုံးအထွေထွေကြေငြာချက်အားဂိမ်း၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြရန်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။
ထိုအချိန်မတိုင်ခင်အထိကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှသည်မည်သည့်အချိန်၌မည်သည့်အချိန်တွင်ကစားနိုင်တော့မည်၊ သို့မဟုတ်အမှန်ဆိုလျှင်၊ Lego Star Wars: Skywalker စစ်ကိုင်း.
← Lego ရဲ့အငြိမ်းစားယူ Creator Expert အခင်းအကျင်းနောက်ဆုံးတော့အမည်အသစ်တစ်ခုကိုရှိပါတယ်
LEGO Super Mario Character Packs Series3ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် →